5 Sababood Oo Mu'miniintu Cabsida Ugu Noolaadaan | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Ku noolaanshaha cibaadada 5 Sababood Oo Mu'miniintu Cabsida Ugu Noolaadaan
Maanta waxaan bari doonaa shanta sababood ee rumaystayaashu cabsi ugu nool yihiin. Masiixi ahaan, waxaa lagaa filayaa inaad tahay geesinimo. Qorniinku wuxuu ku leeyahay kitaabka Daanyeel 11:32 Kuwa xumaanta ka geesta axdiga wuxuu ku kharribi doonaa khiyaano, laakiin dadka Ilaahooda yaqaan way xoog badnaan doonaan oo waxay samayn doonaan waxyaalo waaweyn. Baybalku wuxuu leeyahay kuwa Ilaahooda yaqaan way xoog badnaan doonaan, oo waxyaalo waaweyn bay samayn doonaan.
Intaas waxaa sii dheer, Kitaabka Quduuska ah wuxuu muujiyey in qiimo weyn nalagu iibsaday. Dhiiga qaaliga ah ee masiixa wuxuu inaga dhigay wiilal iyo gabdho ilaah. Taas macnaheedu waa uma baahnin inaan ku noolaano nolosheena annagoo ka cabsanayna waxa cadowgu nagu samayn karo. Sababtoo ah nolosha aan ku noolnahay hadda ma aha tii Ilaah laakiin waa tan Ilaah. Sidoo kale, Qorniinku wuxuu leeyahay Waayo, annagu nama siin ruux cabsi laakiin dhalasho ahaan inuu ku qayliyo Aabbaha Aabbaha. Waxaan nahay wiilashii badbaadada. Aabbahayagu waa kan xoogga ku leh dagaalka. Ilaaha leh awoodda ugu sarreysa adduunka waa aabbahayo. Sidaa darteed, waxaa nalaga rabaa inaan u noolaano sida amiirrada iyo amiiradaha.
Si kastaba ha ahaatee, rumaystayaal badan ayaa weli noloshooda ku jira cabsi. Waxay ku nool yihiin argagax waxa shaydaanku ku samayn karo. Markaan aqbalno Masiixa inuu yahay Rabbi iyo badbaadiyeheenna gaarka ah, xoog iyo geesinimo ayaa nalagu sii daayaa. Waxaan helnaa xoog iyo awood aan ku qaban karno waxyaalo waaweyn. Oo waxaan bilaabaynaa inaan soo bandhigno miraha ruuxa. Way fiicantahay in la ogaado, cabsidu maaha mid ka mid ah midhaha ruuxa Haddii cabsidu aysan ahayn sifo Eebbe, markaa maxaa rumaystayaasha qaarkood weli cabsi ugu nool yihiin? Waxaan higsaneynaa inaan ku sharaxno sababta blogkan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa in marka aad dhammayso akhrinta balooggan, aad ogaan doonto sababta aad weli cabsi ugu nooshahay. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka saarto cabsida wadnahaaga gabi ahaanba.
Shan Sababood Oo Aad Ku Sii Joogi Karto Cabsi
Cibraaniyada 11: 1 Rumaysadku waa hubaasha waxyaalaha la rajeeyo, xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin.
Waxaa laga yaabaa inaad tahay Masiixi, oo iimaankaagu ma aha mid ku filan. Taasi waa sababta aad mar walba uga shakisan tahay awoodda Ilaah, gaar ahaan waqtigaaga dhibaatada. Inaad rumaysato Ilaah way dhaaftaa rumaynta Wuxuu samayn karaa waxyaalo yar. Wali rumaynta Ilaah waa mid awood u leh inuu xaliyo xaalad murugsan marka aysan dareemin ama u ekaan inay tahay wax weyn.
Marka iimaankaagu yar yahay ama uusan ku filnayn, cabsidaadu way sii kordhaysaa. Haddii Eebbe ballanqaaday inuu wax qaban doono, wuu fulin doonaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaad weli u baahan tahay inaad ku dhaqanto iimaankaaga meelaha qaarkood. Ibliisku wuxuu u adeegsan doonaa iimaan la'aantaada inuu kugu cadaabo argagax. Laakiin marka iimaankaaga Ilaah uu xoog badan yahay, kama cabsanaysid waxa cadowgu samayn doono. David waa tusaale fiican. Rumaysadka Daa'uud ee Ilaah wuxuu siiyey kalsooni ah in Goli'ad laga adkaan doono dhammaan khilaafyada tilmaamaya guusha Goli'ad ee aan la dafiri karin.
Daa’uud ma uusan ka baqin aragtida iyo xoogga Goliath. Wuxuu aad ugu tiirsanaa Ilaah inuu ka adkaado Goli'ad. Ogaanshaha Ilaah kuma filna. Iimaanka Eebbe ayaa wax weyn u ah rumayste kasta inuu ka adkaado cabsida.
Ma Garanayo Ilaah Ku Filan
DAANYEEL 11:32 Ku alla kii si xun u sameeya axdiga, wuxuu khiyaanayn doonaa khiyaano; Laakiinse dadka Ilaahooda yaqaan way xoog badnaan doonaan, oo waxyaalo waaweyn ayay samayn doonaan.
Ninku ma rumaysan doono Ilaaha uusan garanayn. Ibraahim wuu garanayay Ilaah taasina waxay sii xoojisay iimaankii uu Ilaahay ku qabay. Ayuub wuu garanayay Ilaah taas oo waliba kordhisay heerkiisa aaminaadda iyo iimaanka Eebbe. Xataa markii cadowgu si xun u silciyey, Ayuub wuu diiday inuu Ilaah diido maxaa yeelay wuxuu hubay in Ilaah awood u leeyahay inuu ka bogsiiyo xaaladda uu ku sugan yahay.
Inaadan Ilaahay Ku Kalsoonayn Ku Filan Si Aad U Xalliso Dhibaatadaada
SABUURRADII 46:10 Iska aamusa oo ogaada inaan anigu Ilaah ahay, Waxaa laygu sarraysiin doonaa quruumaha dhexdooda.
Waxaan inta badan isku daynaa inaan nafteena ku hagaajinno waxyaabo badan oo aan illowno nin Ilaah la yiraahdo. Waxaa jira dhibaatooyin aan awoodeena iyo aqoonteena dhimmi karin. Waxay u baahan tahay inaan ku tiirsanno oo keliya Ilaah si aan u hagaajinno. Laakiin markaan Ilaahay ku filnaan weyno, waxaan ku qasban nahay inaan ka baqno dhibaatooyinkeenna oo aad u badan.
Markuu Masiixa doonnida kula jiray xertiisii, ayuu hurdo weyn ku dhacay, dabayshuna waa dhacday. Rasuulladu waxay isku dayeen intii karaankooda ah si ay xaaladda u badbaadiyaan. Way sameeyeen intii karaankooda ah, laakiin midkoodna dadaalladoodii ama fikraddii midho -dhal uma lahayn inay joojiyaan doonnida inay rogmato ilaa ay u qayliyeen Masiixa, oo hurdo weyn u qabtay si uu u caawiyo.
Sidoo kale, nolosheena, caqabadaha qaarkood maahan kuwa aan wajahayno. Dhibaatooyinka qaarkood ma aha kuwa aan ku guuleysan karno. Markaan ku kalsoonahay Ilaah ku filan, wax walba isaga ayaan u daynnaa. Waxaan u dhiibnaa markabkii nolosheenna madaxnimadiisa. Ilaa markaas, nabad ma heli doonnaa.
Inaan Ilaahay caawimaad weydiisan
Baxniintii 3: 8-9 KQA - Sidaas daraaddeed waxaan u imid inaan ka samatabbixiyo gacanta Masriyiinta, oo aan ka soo bixiyo dhulkaas oo geeyo dhul wanaagsan oo ballaadhan, oo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan, oo ah meeshii reer Kancaan, iyo reer Xeed, iyo reer Amor, iyo reer Feris, iyo reer Xiwi, iyo reer Yebuus. Haddaba bal eeg, waxaa i hor timid oohintii reer binu Israa'iil, oo weliba waxaan arkay cadaadinta ay Masriyiintu ku cadaadinayaan iyaga.
Sanado badan carruurta Isreal waxay ku lumeen dhul qalaad. Masriyiintu waxay ka dhigeen addoomo. Ilaa maalintii ay Ilaah u qayshadeen caawimaad. Markaad raadsato kaalmada Eebbe, waxa ugu horreeya ee dhacaya waa cabsidaada oo lagaa qaado maxaa yeelay waxaad dareentaa badbaado iyo badbaado.
Ilaah wuxuu u soo diray samatabbixiye si uu uga badbaadiyo carruurta Isreal maxaabiisnimada. Markaan Ilaah u qayshanno caawimaad, waan na samatabbixinnaa, cabsina waa nalaga qaaday. Qorniinku wuxuu leeyahay annaga lama siin ruuxa cabsida laakiin waxaa la ina siiyay Wiilnimada inaan ku ooyno Aabbaha Aabbaha.
Marka aadan haysan Ruuxa Quduuska ah
Rooma 8:11 laakiin haddii Ruuxii kii Ciise ka soo sara kiciyey kuwii dhintay idinku dhex noolaado, kii Masiixa kuwii dhintay ka soo sara kiciyey ayaa jidhkiinna dhimanaya nolol ku siin doona Ruuxiisa idinku dhex jira.
Cabsidu waa jinni jirdilaya qof aan lahayn ruuxa Ilaah. Sannado badan oo ay Rasuulladu la shaqeeyeen Ciise, waxay ka maqnaayeen Ruuxa Quduuska ah. Oo Qorniinku wuxuu leeyahay waxaad heli doontaa xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo dego.
Rasuul Butros wuxuu ku sigtay inuu qaraqmo kadib markii uu cabsaday markii uu dul socday biyaha kadib markii Masiixu u yeeray. Waxay ahayd isla Rasuulka Butros oo Ciise dafiray saddex jeer maxaa yeelay wuxuu ka baqay waxa ku dhici doona haddii dadku ogaadaan inuu Ciise la jiray. Si kastaba ha ahaatee, markii ruuxa Ilaah yimid, Rasuul Butros wuxuu sameeyay waxyaalo yaab leh. Wuxuu istaagay kumanaan hortood wuxuuna ku wacdiyey injiilka. Iriddii quruxda badnayd ayuu bukay ku bogsiiyey.
Walaalayaal, awoodda ruuxa quduuska ah lama soo koobi karo. Waad u baahan tahay, waan u baahanahay, dhammaanteen waan u baahanahay. Kuma filnaan karno maxaa yeelay waa dhammaad la'aan.
article PreviousQodobbada Salaadda ee ka soo horjeeda Ruuxa leexashada
Next articleQodobbada Salaadda ee xoogga leh ee ka soo horjeeda Dhaxalka Xun
30 Qodobbada Salaadda oo ka soo horjeedda Ruuxa Dib udhaca
70 Qodobbada Salaadda ee Loo Jeedinayo Caqabadaha
30 Aayaadka Baybalka oo ku saabsan nolosha weligeed ah kjv